करिष्मा ‘महानायिका’ ! - Himali Patrika
करिष्मा ‘महानायिका’ !
हिमाली पत्रिका २७ माघ २०७७, 1:01 pm
राजेश हमाल ‘महानायक’, अनमोल केसी ‘मेगास्टार’ । कोही ‘एक्सनस्टार’ कोही ‘सदबाहार’ । विशेषणको यस्तो फुर्को जोड्ने सिलसिला जारी छ ।
कसलाई ‘महानायक’को तक्मा दिने वा कसलाई ‘मेगास्टार’को लाहाछाप लगाइदिने ? यसको कुनै सर्वमान्य र वैज्ञानिक इकाई छैन । यद्यपि कसैको प्रतिभा, प्रभाव र लोकप्रियताको सामान्य लेखाजोखा गरेर भावनात्मक रुपमा यस्तो विशेषणले सुशोभित गर्ने प्रवृत्ति छ ।
कसले कसलाई कुन विशेषण किन दिने भन्ने कुराको आधिकारिक खाका तयार गरिएको छैन । त्यसैले यहाँ सबैले आ–आफ्नै तालमा डम्फु बजाइरहेका छन् ।
हालैको प्रसंग । अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरलाई एक संस्थाले ‘महानायिका’को मुकुट पहि¥याइदिए ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा करिष्मालाई पहिलो पटक ‘महानायिका’ भनी सम्बोधन गरियो । रमाइलो त के भने कार्यक्रममा ‘महानायक’ राजेश हमाल पनि उपस्थित थिए । आयोजकले उनलाई मञ्चमा उभ्याए । र, उनकै समकालिन अभिनेत्री करिष्मालाई ‘महानायिका’ लेखिएको ‘सैश’ लगाइदिए ।
त्यसपछि उनलाई माला, क्राउन र सम्मानपत्रसँगै ‘महानायिका’ उपाधि दिइयो ।
‘आर के इन्टरटेनमेन्ट ग्रुप’ नामक एक संस्थाले आफ्नो २० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा देखिएको दृश्य हो यो ।
सम्मानित भएपछि करिष्माले भनेकी छिन्, –‘जुन सम्बोधन गरेर मलाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो । म यसलाई एउटा कलाकारलाई गरेको सम्मानका रुपमा लिएकी छु । र, उहाँहरुप्रति धेरै आभारी छु ।’
सन् १९७४ मा ललितपुरमा जन्मिएकी करिश्माले १४ वर्षको उमेरमा ‘सन्तान’बाट डेब्यु गरेकी हुन् । ‘कस्तुरी’ चलचित्रमा काम गरेपछि करिष्माले निर्देशक विनोद मानन्धरसँग विवाह गरिन् । विवाहपछि उनको चर्चा अझ चुलियो ।
एकताका यस्तो पनि थियो कि, नायिका भनेकै करिष्मा हुन् । त्यसबखत उनले एकपछि अर्को हिट फिल्म दिइन् । उनले ‘मायालु, ट्रक ड्राइभर, भाउजू, पंन्छी, रणभूमि, बसन्ती जस्ता चलचित्र हिट भए ।
तर, पछि आफ्नै लगानीमा ‘ढुकढुकी’, ‘बाबुसाहेब’ जस्ता चलचित्र निर्माण गरिन् । आफैले मूख्य भूमिकामा अभिनय गरिन् । चलचित्र चलेन । एकातिर आफ्ले निर्माण गरेको चलचित्रले हावा खानु र अर्कोतिर करियर पनि ओह«ालो लाग्दै जानुले उनलाई कतिसम्म दिक्क बनायो भने, चटक्कै करियरलाई बिट मारेर नेपाल छाडिन् ।
राजनीतिबाट मोडिएर दृढतासाथ पढाईमा लागेकी उनले यसतर्फ भने एक हदसम्म सफलता हासिल गरिन् ।
करिष्माकी एक छोरी कविता छिन् । उनले पनि चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’मा कविताले अभिनय गरेकी हुन् । तर, चलचित्र प्रदर्शनमा आएको–गएको दर्शकलाई पत्तो भएन् ।